Southwest Airlines 6.9.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.9.0 လြန္ခဲ့ေသာ6ရက္က
Application မ်ား ခရီးသြားျခင္း & ေဒသဆိုင္ရာ Southwest Airlines
Southwest Airlines ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အတွက် Check, ကိုပြောင်းလဲရန်သို့မဟုတ်သင့်ပျံသန်းမှု cancel ။ Plus အား, EarlyBird စစ်ဆေးမှု-In®တူသော extras ထည့်ပါ။
စူပါ-Fast စျေးဝယ် & ဘွတ်ကင်
သငျသညျ ခရီးသွားခြင်းဖို့လိုအပ် အရာအားလုံး
အိမ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သင်၏လက်ချောင်းထိပ်မှာသင်မှန်လိုအချက်အလက်များရယူပါ - တံခါးဝသတင်းအချက်အလက်, အနေအထား, လေယာဉ်အဆင့်အတန်းနှင့်ပိုပြီး boarding ။
အဆိုပါ Go ကိုအပေါ်ဘော်ဒါဆောင် Pass ကို
သင့်မိုဘိုင်းဘော်ဒါကြိုတင်မဲအတွက် 24 နာရီ Pass ကိုရယူပါ။ * multi-ခရီးသည်ကြိုတင်မှာကြားထားပေါ်တွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘော်ဒါ Pass နှင့်ရယူသွားရန်, သင်-in ကို logged နှင့်သင့်ခရီးစဉ်နှင့်ဆက်စပ်နေသင့်ရဲ့ Rapid Rewards®အရေအတွက်ရှိသည်ရပါမည်။
Inflight Entertainment က
သငျသညျ, 1 အခမဲ့တိုက်ရိုက်တီဗီကြည့်ရှု 1 အခမဲ့ဂီတကိုနားထောင်အခမဲ့ဂိမ်းများဆော့ကစား, access ကို On-demand တီဗီအကြောင်းအရာနိုင်ပါတယ်ရှိရာကျွန်ုပ်တို့၏ Inflight Entertainment က Portal ကိုရန်သင့်အားယူရန်အတွက် App ကိုသုံးပါ2များနှင့်သီးခြား app ကို2ကို download လုပ်ပါရန်မလိုဘဲ, Movies စောင့်ကြည့်
* သာ Wi-Fi-enabled လေယာဉ်ပျံပေါ်ရရှိနိုင်။ ကန့်သတ်အချိန်ကမ်းလှမ်းမှုကို။ အဘယ်မှာရှိနိုင်ပါ။ 1 ကြောင့်လိုင်စင်ကန့်သတ်ခြင်း, Wi-Fi-enabled ကိုနိုင်ငံတကာလေယာဉ်ခရီးစဉ်အခမဲ့တိုက်ရိုက် TV နဲ့ iHeartRadio အပေါ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များအပြည့်အဝကြာချိန်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။2ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှု On-demand တီဗီအကြောင်းအရာကိုရွေးပါ, Google ကနေအနောက်တောင် app ကိုသင်တို့ပြေးမတိုင်မီ Store မှာ Play ကို download လုပ်ပါရန်။
သွားလာမှုအံဆွဲထဲမှာဆက်သွယ်ရန်ဆင်း scrolling အားဖြင့်တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်းမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုယ်စားလှယ်ကိုဆက်သွယ်ပါ, ပြီးတော့ "Chat" ပေါ်တွင်ထိပုတ်ပါ။
လေဆိပ် Pickup နှင့် Drop-ချွတ်
Lyft®နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွဲဖို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, သင်ယခုသင်တစ်ဦးLyft®တောင်းဆိုရန်ကိုကူညီ app ကိုသုံးနိုငျ! သငျသညျ booking မတိုင်မီရောက်ရှိနှင့်ခန့်မှန်းစျေးနှုန်းခန့်မှန်းအချိန်ကဲ့သို့အ key ကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုသိပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးငှားရမ်းကားတစ်စီးလူတစ်ဦးပိုမို? သင်လည်း, အပလီကေးရှင်းကြောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။
လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ခရီးသွားလိုအပ်ချက်အားလုံးစာအုပ်ဆိုင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကိုအသုံးပြုပါ။
သငျသညျ ခရီးသွားသည့်အခါ ဆုလာဘ်များရယူနိုင်သော
Rapid Rewards® sign up ပြုလုပ်ပါနှင့်သင့်ပျံသန်းမှုအပေါ်ရမှတ်ဝင်ငွေ။ သင်သည်သင်၏ Rapid ဘွတ်ကင်ကာလအတွင်းအရေအတွက်ကချီးကိုထည့်သွင်းဖို့မေ့လျော့ခဲ့သလား - အဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်မှုတွေ, သင်သည်သင်၏ပျံသန်း booking ပြီးနောက်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်နေဆဲအချက်များဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ပိုပြီးပျံသန်းမှုဝယ်ယူရန်သူတို့အားရမှတ်ကိုသုံးနိုင်သည်!
Southwest Airlines အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Southwest Airlines အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Southwest Airlines အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Southwest Airlines အား အခ်က္ျပပါ
michael-belisle စတိုး 2.86k 809.6k
Southwest Airlines ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
ေနာက္ထပ္ ခရီးသြားျခင္း & ေဒသဆိုင္ရာ အက္ပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္
APK အေၾကာင္း Southwest Airlines အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 6.9.0
ထုတ်လုပ်သူ Alaska Airlines
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://mobile.southwest.com/#/privacy-policy
Release date: 2019-09-13 09:26:28
လက်မှတ် SHA1: 07:3F:A3:0D:26:EF:AC:F6:9E:2B:77:0C:DB:27:87:BA:E0:54:3C:AC
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Rajeev Nair
အဖွဲ့အစည်း (O): Southwest Airlines
နယ်မြေ (L): Dallas
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Texas
Southwest Airlines APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ